लकडाउनमा सुत्केरी हुँदाको व्यथा | कोरोना कहर | कोरोनाको बेला.. लकडाउन कथा
लकडाउनमा सुत्केरी हुँदाको व्यथा
२७ बैशाख २०७७, शनिबार १९:३८
मेरो नाम रिता बस्नेत हो । बारा जिल्लाको कोल्हवी नगरपालिका वडा नं. ८ मा बस्छु । यतिबेला म सानो छोरा स्याहार्न व्यस्त छु ।
होलीपछि कोरोनाको हल्ला अलि बढ्न थालेको हो । म गर्भवती थिएँ । कोरोनाको कुरा सुनेर डर लाग्थ्यो । नेपालमा त्यस्तो धेरै नदेखिए पनि किन हो किन मलाई अलि अलि डर लागिरहन्थ्यो । झन् चैत्र ११ गतेबाट लकडाउन भएपछि त अस्पताल कसरी जाने, एम्बुलेन्स पाइएला कि नपाइएला, अस्पतालले भर्ना लेला कि नलेला भन्ने चिन्ताले म र मेरो परिवारलाई सताइरहन्थ्यो ।
हाम्रोतिर डर भनेको भारतबाट आउनेहरुले सार्ने भएकोले हो । भारतमा पनि धेरै संक्रमण नभएको सुन्दा म घरीघरी ढुक्क पनि हुन्थें ।
यो मेरो दोस्रो बच्चा हो । यो भन्दा पहिले सुत्केरी हुँदा म विरगंजको नारायणी अस्पतालमा भर्ना भएकी थिएँ । त्यो सरकारी अस्पताल हो । त्यहाँ सजिलैसँग डेलिभरी भएको थियो । त्यसैले यो पालि पनि त्यहीं जाने भनेर सोचेकी थिएँ ।
लकडाउन भए पनि एम्बुलेन्स चलेकाले अस्पताल कसरी जाने भन्ने चिन्ता थिएन तर कोरोनाका बिरामी बढी हाले भने के गर्ने होला भनेर मनमा डर थियो । मलाई अस्पतालले भर्ना गर्ला कि नगर्ला, गरिहाल्यो भने अस्पतालका बिरामीहरुबाट कोरोना सर्ने हो कि भन्ने डर कता कता थियो । वीरगंजका अस्पतालहरुले बिरामीलाई भर्ना नगरी फर्काएको समाचार पनि सुनेकी थिएँ । यसले गर्दा मेरो मनमा डर झन् बढ्दै थियो । अस्पताल जाने दिनसम्म ज्वरो नआओस् भनेर मनमनै प्रार्थना गरिरहन्थें, ज्वरो आयो भने अस्पतालले भर्ना नगर्ने हो कि भन्ने पिरले ।
हुन त मलाई डाक्टरले वैशाख ६ गतेको डेट दिएका थिए । तर मलाई वैशाख २ गते नै व्यथा लाग्न सुरु भयो । त्यो दिन अरु दिनभन्दा विल्कुलै फरक थियो । कोरोनाको डर अनि लकडाउनले जताततै बन्द थियो । बिहान कम्मर र पेट एकदम दुख्यो । मलाई बच्चा घरमै जन्मिन्छ कि जस्तो व्यथाले च्यापेको थियो । श्रीमानले हतार गर्दै एम्बुलेन्सलाई फोन गर्नु भो । एम्बुलेन्स सजिलै पाइयो । हामी बिहान ७ बजे बल्ल एम्बुलेन्स चढ्यौँ । नारायणी अस्पताल जाने कि कता भनेर श्रीमान् र ड्राईभरबीच कुराकानी भयो । मलाई त नारायणी अस्पताल जाने इच्छा थियो, नजिक पनि अनि सजिलो पनि तर ड्राइभरले त्यहाँ अहिले कोरोना लागेका बिरामी राखेकाले अरु बिरामी लिंदैन भनेपछि हामी हेटौंडा अस्पताल तिर लाग्यौं ।
चैत्र ३० गते मात्रै वीरगन्जमा तीन जना कोरोना संक्रमित भेटिएका थिए । त्यसपछि नारायणी अस्पताल मात्र होइन अरु अस्पतालले पनि सितिमिति अरु रोगका बिरामी लिन मानेका थिएनन् रे । अनि केहीले त समयमा उपचार नपाएकाले उनीहरूको ज्यान गयो भन्ने पनि सुनेकी थिएँ । यसले गर्दा मन झन् तर्सिएको थियो ।
करिब ९ बजे हामी हेटौंडा अस्पताल पुग्यौँ । १० देखि १०:३० को बिचमा बच्चा जन्मियो । अपरेशन गर्नु परेन । अपरेशन गर्नु परेको भए धेरै दिन अस्पताल बस्नुपर्थ्यो । खर्च बढी लाग्थ्यो । रोग सर्ने डर पनि बढी हुन्थ्यो ।
कोरोनाबाट बच्न एकअर्काबाट टाढा बस्नु पर्छ भनिए पनि अस्पतालमा त्यसको पालना भएको थिएन । स्वास्थ्यकर्मीले आफ्नो सुरक्षाका सामान लगाएका थिए तर अरु व्यवहार सामान्य थियो । न उनीहरू टाढा बस्थे न त मसँग मास्क थियो । मनमनै डिस्चार्ज कहिले हुने हो भन्ने मात्र सोचिरहन्थेँ । मनमा एउटै थियो डर कोरोना लाग्छ कि भन्ने । किनभने अस्पतालमा धेरै थरीका मान्छे हुन्छन् । कसलाई के भएको छ के थाहा हुन्छ र ! नयाँ मान्छे जो देखे पनि डर र शंका लाग्थ्यो मलाई । अस्पतालमा जसलाई पनि कोरोना लागेको छ जस्तो लाग्थ्यो ।
त्यो दिन हेटौंडा अस्पतालको माहोल नै शंका उत्पन्न गराउने खालको थियो । हामी पुगेको केही समयमा एउटी सुत्केरीको मृत्यु भएको थियो रे ! डाक्टरले उनलाई बचाउन नसके पनि बच्चा चैं बाँच्यो रे ! सुत्केरी महिलाको मृत्यु अन्य कारणले भए पनि मान्छेहरु कोरोनाले गर्दा मरेकी भन्थे । त्यस्तो सुन्दा झन् डर र चिन्ता लाग्थ्यो । अस्पतालबाट कहिले घर फर्कने भनेर सोधिराख्थें ।
त्यहाँ अर्को समस्या भनेको खानेकुराको थियो । अस्पतालमा क्यान्टिन भए पनि खाना लिन घन्टौं कुर्नु पर्ने । त्यो पनि जाउलोका लागि । तातो पानी पनि पाइएन । चौबीस घण्टा काट्न धेरै गाह्रो भयो । पहिले नारायणी अस्पतालमा सुत्केरी हुँदा यस्तो विधि गाह्रो भएको थिएन ।
घर फर्केपछि भने ढुक्क भएँ । अहिले म घरमै बसिरहेकी छु । घरमा सासु-ससुरा, श्रीमान् र तीन बर्षकी जेठी छोरी छन् । सासु ससुरा खेती गर्नुहुन्छ । मेरो श्रीमान् मार्केटिङको काम गर्नुहुन्छ । काठमाडौंमा बस्नुहुन्छ तर अहिले लकडाउन भएर घर आउनु भएकोले धेरै सजिलो भएको छ । म पनि पढेलेखेको भएकोले आफनो ख्याल गरिरहेकी छु । शतर्क भएकी छु । यस्तो बेला सानो बच्चा स्याहार्न अरुबेला भन्दा गाह्रो छ तर पनि मैले बच्चा स्याहार्न पूरै ध्यान दिएकी छु । अहिलेसम्म म र मेरो बच्चा स्वस्थ छौं । हामी सामान्य परिवारका भएकाले धेरै सजिलो पनि छैन र धेरै गाह्रो पनि छैन । आफ्नै खेतबारीको हरियो तरकारी तथा घरकै गाईको दूध खान पाएकी छु ।
गाउँघरमा लकडाउनको खासै असर छैन । बजार बन्द छन् तर आवत जावत गर्नेहरु उत्तिकै छन् । यहाँ खानेकुराको अभाव छैन । फलफूल बाहेकका अन्य खानेकुरा सजिलै पाइन्छ । गाउँघरमा भएको र आफ्नो घरमा नभएको कुरा पालो पैंचो गरेर भए पनि काम चलिरहेको छ ।
यो कथा रिता बस्नेतसंग गरीएको कुराकानी मा रहेर शिवनाथ यादबले लेख्नु भएको हो ।
पर्यटन क्षेत्रमा मात्रै लाग्नेहरूको अवस्था नाजुक छ
१ आश्विन २०७७, बिहीबार १६:२४
सबैको वेग रोक्न सक्ने तागत
२२ जेष्ठ २०७७, बिहीबार २२:०६